Dadwaynaha reer Zimbabwe oo maanta u dareeray doorashada Madaxtimada | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA CAALAMKA Dadwaynaha reer Zimbabwe oo maanta u dareeray doorashada Madaxtimada
Dadwaynaha reer Zimbabwe oo maanta u dareeray doorashada Madaxtimada
Muqdisho (SNTV);- Dadka reer Zimbaabwe ayaa dooranaya hoggaan cusub, mudo ka badan 30 sano oo xukunka dalkaasi haystay madaxweynihii hore ee dalkaasi Rober Mugabe,waxaana ku tartamaysa doorashada dhowr musharax.
Waxaa doorashada ku loolamaya xisbiyada mucaaradka iyo muxaafadka oo tiro ahaan gaaraya ilaa 20 xisbi,waxaana kamid ah madaxweynaha haatan talada haya Emerson Mnangagwe iyo Nelson oo xaga mucaaradka ka soo jeeda.
Dhanka kale madaxweynihii hore ee talada laga riday ee dalkaasi Robert Mugabe ayaa sheegay in uusan taageersanayn xisbiga muxaafadka oo uu wax ka soo dhisay,wuxuuna sheegay inuusan taageereyn ninka xilka ka qaaday oo ku tartamaya magaca xisbiga isaga uu sameeyey ee Zanu PF, Emmerson Mnangagwa,maadaam uu yahay ninkii xilka ka tuuray.
Taasi bedelkeeda waxaa uu Mr Mogabe uu sheegay in uu taageersan yahay ninka dhanka mucaaradka ka socda ee Nelson Chamisa,isagoo intaasi ku daray in marnaba uu codsiiga siin doonin mr Emerson.
Hadalkaasi ayuu shalay ka sheegay shir jaraaid uu gurigiisa oo kuyaala magaalada Harare ee caasimadda dalkaasi Zimbabwe ugu qabtay warbaahinta,wuxuuna cadeeyey mowqifkiisa.
5,635,706 ayaa iisu diiwaangeliyey iney doorashada codkooda ka dhiibtaan, mucaaradkuse waxay ka shaki qaban saxnaashaha tiradaasi la sheegay.
43.5% dadka cod bixinta iisu diiwaan geliyeyy waxay da’doodu ka hooseysaa 35 jir.
10,985 oo goob doorasho ayaa la diyaariyey,iyadoo maanta dadku ay safuuf dhaadheer ugu jiraan si ay uga qeyb qaataan doorashadaasi.
Previous articleRa’iisul wasaare Khayre iyo wafdigiisa oo xalay casho sharaf loogu sameyeey Garoowe
Next articleRa’iisul wasaare Kheyre oo ka hadlay nooca siyaadda dalka u baahan yahay